Ọdụ Ngalaba Na-adọba ụgbọala Ọ Bara Uru? | Martech Zone
Sunday, Jenụwarị 28, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mba… ma obu obughi. Ọ bụghị maka m, agbanyeghị.
Gịnị bụ ngalaba na-adọba ụgbọala? Ọ bụ mgbe ị nwere nnukwu echiche maka ngalaba aha, ị na-elele ka ị hụ ma azụrụ ya. Ọ bụghị… ị zụrụ ya. Kama iji ngalaba maka weebụsaịtị, ị 'ga - adọba ya. Ngalaba na-adọba ụgbọala bụ ụzọ nke ọzọ ego na ụfọdụ n'ime ndị kasị ibu nwe ngalaba aha na-eme ka ọtụtụ nde mmadụ na ya. Enwere ụzọ abụọ iji nweta ego na ngalaba ị na-adọba ụgbọala:
Ndị mmadụ mgbe ụfọdụ pịnye na a URL kama ịchọ ya. Ọ bụrụ na ị nwere aha ngalaba ahụ, ịnwere ike itinye mgbasa ozi bara uru na ibe ọdịda. Ọ bụrụ na ndị mmadụ pịa mgbasa ozi, ndị mgbasa ozi na-akwụ gị ụgwọ.
Ndị mmadụ chọrọ aha ngalaba ahụ, yabụ ha mere ka ị bụrụ onyinye.
Ka m na-agụ otu edemede taa, ọ chetaara m banyere ule nke azụmahịa a nke m kwesịrị ịkọ maka ya. Ihe karịrị otu afọ gara aga, agụrụ m banyere saịtị di na nwunye na azụmaahịa 2.0 na-enye akụrụngwa na-adọba ụgbọala. Oge ahụ, Sedo bụ otu n'ime ngalaba na-adọba ụgbọala na ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ebubo n'ihu. Edere m blog na-ekwupụta na m ga-enye ya ogbugba.
Aha ngalaba aha m nwere obi ụtọ kachasị mma bụ MMMMMMMMMMMMMM. Mgbe otu afọ m na-adọba ngalaba ahụ, enwere m akara 93 nke mere $ 1.22 na enweghị onyinye maka ire ere $ 2,500. Ebe ọ bụ na m na-akwụ $ 14.95 kwa afọ maka mmeghari ọhụụ ọ bụla nke ngalaba ahụ, nke ahụ bụ ọnwụ dị mma.
Nke ahụ bụ njikọ m kachasị mma.
N'ezie enwere ụzọ iji mee ka nke a rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na m nwere ọtụtụ puku ngalaba aha dọwara na a na-edeba aha na-enye m obere udu, M jisiri mgbasa ozi onwe m… ikekwe na-etinye ọdịnaya na saịtị na ụfọdụ na-akpa àgwà na mgbasa ozi - I can turn a profit. Ọ bụrụ na m mepụtara dollar kwa afọ na aha nke ọ bụla, enwere m ike ịzụta aha 100,000 ma mee ego m ga-edozi. Ma enweghị m oge iji mee nke ahụ. Ọzọkwa, aha ndị kachasị mma azụọlarị ya ọ ga-ewe oge dị ukwuu iji chere na ngalaba ndị nwụrụ anwụ ma ọ bụ nnukwu ego iji gbalịa ịzụta ndị ọzọ nwere ike gbanwee obere ma ọ bụ abụọ.
Yabụ, ọrụ ị na-adọba ụgbọala na ngalaba m agwụla. Ikpeazụ m ga-abụ itinye ezigbo ngalaba m na Sedo maka $ 39 iji nwee ya na ihu ihu ihu iji hụ ma m ga-ahụ onye zụrụ ahịa. Aga m atụ aka na ngalaba m ndị ọzọ na blọọgụ a, nke na - ewepụta usoro ịpị nke ọma karịa na Sedo ($ 0.10) EPC). Aga m eme ka ị mara ka ọ si aga!
Julaị 5, 2007, elekere 3:23 nke ehihie
Ị rụpụtala ụfọdụ ezigbo nsogbu ebe a na-adọba ụgbọala" dị ka ọ dị ugbu a. Ịkwesịrị ịnwe ma ọ bụ ngalaba okporo ụzọ ole na ole ma ọ bụ ọtụtụ ngalaba na-eme ntakịrị karịa ịkwụ ụgwọ onwe ha.
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ngalaba m na-eme ebe a na-adọba ụgbọala nke ọma karịa ka ha nwere ọdịnaya yana mgbasa ozi AdSense dị na ha.
Nọvemba 27, 2007 na 8:37 nke ụtụtụ
Ụgbọ ala ngalaba anaghị arụ ọrụ, ọ bụ naanị igbu oge, ọ gwụla ma ị nwere 100+ 200+ ezigbo ngalaba ịnwale, debanye aha ngalaba ole na ole ma chọọ inweta uru bụ nrọ, egbula oge
Mee 8, 2008 na 3: 51 PM
Ọ bụrụ na ngalaba aha na-ewepụta ego ha ga-enweta karịa ego reg, ọ ga-aba uru ịdọba ya. Chọta 100 nke ụdị ngalaba a ma ị nwere ike ịmepụta ezigbo ego
Mee 12, 2008 na 4: 38 AM
Ọ bụrụ na ị na-eji ngalaba na-adọba ụgbọala ha na-ewere akụkụ nke ego ị nwetara! Ọ bụrụ na ị kwado script nke ebe a na-adọba ụgbọala nke gị (dị ka nke dị na http://www.domainzaar.com Ị na-edobe 100% nke ego mgbasa ozi gị… ha na-agbakwa nkwalite nke aha COM DOMAIN FREE na EXPIRED DOMAIN FINDER SOFTWARE ruo ngwụcha Mee 2008. lelee ya. http://www.domainzaar.com
Jul 22, 2008 na 10: 01 AM
Enweghị ike iguzogide ịza ajụjụ ebe a gbasara domainzaar.
Oo, ezigbo. Kedu ihe efu ego. Kpọmkwem ego m, $100 m.
Thomas - ma ọ bụ aha ya ọ bụla - nyere aka nke ukwuu n'ịgbanwe ozi ịntanetị mgbe m na-agbalị ịkwụ ụgwọ mana mgbe nbudatachara .... ndewo onye ọ bụla n'ụlọ??? Ọtụtụ ozi-e ma ozugbo yana site na ụdị kọntaktị webụsaịtị ha. Ọ dịghị ihe! Enweghị nzaghachi.
Edemede a bụ IMHO n'efu nke $100.
Enwere scripts efu dị na-arụ ọrụ n'ezie.
Ela n'iyi ego ị nwetara siri ike na-eziga ya na domainzaar.
Julaị 10, 2008, elekere 10:35 nke ehihie
M zụtara site domainzaar afọ gara aga, nnukwu mmejọ.
Enwere m aha ngalaba mara mma (bas3.com) wee wụnye ngwanrọ domainzaar na ya, n'izu na-abịa, mmadụ weghaara DNS m ma na-atụ ya aka na webụsaịtị ya. DZ na-edobe paswọọdụ nchịkwa na ederede doro anya na faịlụ ederede enwere ike ịnweta.
Ajụrụ m te programmer ka m dozie nke a, chere ọnwa 2 wee hapụ ya.
Ana m arụ ọrụ ugbu a iji nweta ngwọta akwadoro maka ebe a na-adọba ụgbọala, nke nwere ike ibuga saịtị isiokwu 5 ngwa ngwa n'ime nkeji ma ọ bụ karịa, ana m eche otu esi akwụ ụgwọ maka ya, m ga-ewepụ% n'elu? ekwesịrị m ịnwe ego kwa afọ maka ọnụ ọgụgụ ngalaba nwere oke? m kwesịrị ikwe ka ịnwe ya dịka ngwaahịa enwere ike ibudata?
Ihe ndị a bụ ihe m kwesịrị ịjụ onwe m, onye coder na-amata nke ọma na webapps API dị na netwọkụ niile, naanị m kwesịrị imepụta na ịzụ ahịa ya.
Jul 31, 2008 na 8: 26 AM
Domain Zaar bụ ihe efu, ihe ọchị na mmejọ maka onye ọ bụla na-atụle ịzụrụ ngwaahịa a. Akụrụngwa anaghị arụ ọrụ dịka akọwara ma ọ nweghị nkwado. Ọ bụrụ na ị na-adịghị uche nkewa na $99 na-aga n'ihu na-eme ya ... gị ngwaahịa agaghị arụ ọrụ nke ọma na agaghị anụ ihe ọ bụla si Zaar Scam nwoke ọzọ. Obodo ojoro.
Sep 13, 2008 na 7: 00 AM
Ha niile ezighi ezi. Gbalịa fabulous.com na hitfarm.com - mkpa ịbanye na mmemme adịchaghị ha, n'agbanyeghị. Malitere afọ ole na ole gara aga, ugbu a na-eme 12,000/ọnwa na-aga ụlọ, 23,000/mo nnukwu.
Dee 16, 2008 na 6: 08 AM
Ebe a na-adọba ụgbọala bụ maka ndị umengwụ ndị na-enweghị ike ime microsites akpaaka maka aha ngalaba ha. Ọdịmma nke ebe a na-adọba ụgbọala bụ na ị na-enweta naanị 30% nke ikike gị yana na ị naghị arụ ihe afọ maka ngalaba gị.
Douglas, daalụ maka mkparịta ụka a. Ndụmọdụ dị nta, ọ bụrụ na ị chọghị: gbanwee onye na-edeba aha gị. Anaghị m akwụ ụgwọ ihe karịrị $8 ruo $9 maka mmeghari ohuru. $14.95 dị oke elu, ụzọ dị oke elu !!! Ị nwere ike na-echekwa $6 n'ụzọ dị mfe na ngalaba aha ọ bụla. Dị ka agwa maka otu ngalaba mana nye ya mgbako ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị nwetara, sịnụ, 100 ma ọ bụ 1000 ngalaba aha… Ọtụtụ ngalaba na-atụba ụgbọ ala ọhụrụ na ezumike okomoko na ndị na-edeba aha ha dị oke ọnụ 🙁
Jenụwarị 28, 2009, elekere 4:36 nke abalị
Nke a bụ blọọgụ kacha akpa ọchị gbasara ngalaba na-adọba ụgbọala na ngalaba m gụrụ ogologo oge. Ebe a na-adọba ụgbọala nwere mmejọ ya ma na-efunahụ ya na afọ ọ bụla na-agafe mana ezigbo aha ngalaba aha ka na-eme ndị nwe ha ezigbo ego (nke ahụ bụ ọtụtụ narị puku dollar na puku dollar kwa ụbọchị n'adịghị ka ihe atụ nzuzu gị nke dollar kwa 100,000 ngalaba aha nke ga-abụ. a huge loss when you factor in renewal fees.) And to base your opinion on dabbling in domain water with really bad domain names that a real domainer would never bother to own let alone park is another mistake. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, na onye ọ bụla na-ahụ maka ngalaba ga-agwa gị, ị ga-enwe ohere ka mma ịme ego na/ma ọ bụ tụgharịa ngalaba gị site na ịmepụta ya. Naanị ụfọdụ ụdị aha ngalaba aha na-eme nke ọma mgbe a na-adọba ụgbọala na navyvets.com abụghị otu n'ime ha. Ọ ka mma iji apụl tụnyere apụl kama iji apụl tụnyere brokoli. Naanị kwuo'
Jenụwarị 28, 2009, elekere 7:40 nke abalị
Chaị – ejighị m n'aka na m ruru ihe nrite maka 'blọgụ blọgụ kacha akpa ọchị'. Ekwenyere m gị n'ezie. M nnọọ kwuru na ọ bụghị nke m na m wetara ụfọdụ akwụkwọ nkwado. Ndị ọzọ nwere ike ịhụ na ọ bụ ezigbo ụlọ ọrụ na-erite uru… ọ bụghị naanị m.
Jun 27, 2009 na 6:03 nke ụtụtụ
Aha ngalaba ebe a na-adọba ụgbọala Enyere aka na-eleta m na SedoTucktai.com& ree ya na Iji nnukwu Registration.U nwere ike Mepụta saịtị Maka ngalaba aha Parking & onye na-ere ahịa ị nwekwara ike ịbụ onye Reseller nke saịtị ahụ ..